Famaritana malagasy Anisan' ny mpanoratra tantara foro-nina mahay mitsikera toetr' olona aoka izany Ramangamalefaka - anarana indrana nentin' i Alfred Ramandiamanana (1886 - 17 Mey 1938). Eto amin' ity "Heloka roa ambin' ny folo na Tsy mipepo" ity, dia toetr' olona toa mahatsikaiky no tsikerainy. Maro ka-razana ny fitiavan-tena - na ny mari-marina kokoa angaha maro akanjo itafiana ny fitiavan-tena; anisanny fisehoany hafa kely ity eto amin' ny sombin-tantara ity. Hita marimarina izao fa zavatra tsy mahomby no mba irin' ilay dadatoa hofongorina ao amin' izy mivady alohan' ny hananganany azy ho zanaka, nefa dia mahatsikaiky ny afitso-dRavoahirana: raha mikasika ny tenany ny fitenenana (momba ny fihetsiny, ny fihaingoany diso fampana, ny didy akanjony...), odiany jamba sy marenina, fa raha mikasika olon-kafa kosa - na ny vadiny aza - izy no mila-tsaka ho vavolombelona mpandentika. [Rajemisa: Fiteny 3]